Dalxiis Warshad - Wuxi Kuanyang Dharka Teknolojiyada Teknolojiyada Co., Ltd.
Wuxi Kuanyang Dharka Teknolojiyada Co., Ltd.oo la aasaasay 1995, wuxuu leeyahay khibrad ka badan 25 sano aagga dharka. U heellan abuurista dhar tayo sare leh iyo sidoo kale bixinta adeegga ugu fiican.
Wuxi Kuanyang Dharka Teknolojiyada Co., Ltd.wuxuu ku takhasusay horumarinta iyo adeegsiga dharka isboortiga banaanka iyo gudaha. Sanadihii la soo dhaafay, sababo la xiriira walaaca caalamiga ah ee wasakheynta caaga, shirkadeena waxay u guureysaa dhar waara oo dib loo warshadeeyay.Waxa naga go'an inaan dhisno silsilad sahay u ah bey'adeed oo deegaanka u fiican iyo alaabooyin waara.
Shirkadeena waxaa lagu qalabeeyaa mashiinno 8-midab oo xirfad leh, 10-midab oo mashiinno daabacan iyo mashiinada daabacaadda dhijitaalka ah, Waxaan u adeegsanaa alaabo ceyriin oo tayo sare leh si aan u hubino in fikrad kasta oo macaamiisha ah la rumaysan karo. karti wax soo saar, oo dabooli karta baahiyaha wada-hawlgalayaasha.
Sanadaha soosocda Waxaan si xoog leh u horumarinay tikniyoolajiyadda daabacaadda dhijitaalka ah si aan ula kulanno baahiyaha macaamiisha .Tignoolajiyada daabacaadda dhijitaalka ah waa qaab nooc cusub daabacan, waxay ka tagaysaa hababka isku dhafan ee samaynta saxanka, waxay hagaajineysaa saxnaanta daabacaadda, waxay ogaaneysaa dufcado yaryar 、 noocyo badan, ubax midabbo badan leh, oo xaliya raad-raaca daabacaadda dhaqameed ee Waaweyn, wasakh daran, iwm.
Waxaan bixin doonaa warbixin tijaabo ah iyo warbixinta kormeerka kama dambaysta ah oo ku saleysan nidaamka 4-dhibic ee dhammaan dharkayaga, waxaan sidoo kale bixin doonnaa nidaam adeeg oo iib ah kadib.